Yintoni, into efanelekileyo yokuba abafazi bayaphupha? Unamandla, uthembeke, ukhaliphile. Udibanisa kumntu wakhe umthandi okhutheleyo kunye nomninimzi okhutheleyo wendlu, ummeli onobubele kunye nommeli othembekileyo - yiloo magama ahlala echaza i-knight yanamhlanje. Ewe, nanini na xa sithandana nomnye umntu, ukubukeka kwethu kugxininiswa ukunyamezwa kwemizwa, sidakamizwa ngama-hormone size sihlale siphapheme, ngoko sibona inkosana ngehashe elimhlophe okanye ngaphandle kwayo. Emva koko, ngokwemvelo, xa i-romantic mood iqhuma kancane, siyamangaliswa ukuqonda ukuba inkosana ayinayo imilinganiselo ephakamileyo, ihamba kwiisokisi ze-holey, emva kosuku olukhuni olulele kwi-sofa ngebhiya kwaye ayifuni nantoni yonke imizamo yentokazi yakhe enhle ...
Nangona, ngokunyaniseka entliziyweni, ndifuna ukuthetha ngenxa yeempazamo ezithile, sivale amehlo ethu: kuba kuwo wonke umntu unokufumana into ongayifumana. Into eyona mibi kakhulu kwinkqubo yethu yeentlanzi kunye nokuzithemba kwethu ngokubanzi kukufumanisa phantsi kwe-mask of "efanelekileyo" ye-pacifier. Ngako oko, amantombazana enemibuzo emininzi, indlela yokuhlukanisa umntu "ekutyaleni kwakhe? Ungayibona njani njenge-pacifier? Yaye yintoni enokuyenza ngeyunithi yesini esomeleleyo, eyaba yinto? Yile nto inqaku lethu liphathelele.
Umnini wenqaba yomoya
Uhlobo oluphambili phakathi kwendoda engumntu onomnqweno ongenakunqwenelekayo ukubonakala nokujonga bhetele (ehlakaniphile, ekhangayo, enomdla, ecebileyo, njl. Njl) kunokuba kunjalo. Loo mntu, njengomntwana omncinci, uthanda ukuziqhayisa ngeempumelelo, nokuba uthobekile okanye uvelise ngokupheleleyo. Kwimeko yokucima umthombo wefantasy, uyakhela udonga lwemfihlakalo. Kuloo mabhinqa angama-nondescript angakwazi ukuza kunye nezidingo ezifihlakeleyo: ukunqoba kwintando yothando, kunye nomsebenzi wakhe, kunye nehashe elimhlophe elitshiweyo.
Ngokuqinisekileyo, abantu abanjalo banokuthi bancedise umfanekiso womntu onomntu onomntu okhethiweyo, onxibe, ozobambisana ngokuqinisekileyo uya kugxininisa imbeko yakhe. Ngenxa yokuba uyaziqhayisa izinto angenayo ngokwenene: imoto yakhe, i-real estate okanye ipasipoti, unokukwazi ukuyifumana kalula. Ngaba ufuna ukwazi kakuhle into eyenziweyo? Ngengozi, tyelela emsebenzini! Ngokuqinisekileyo, uya kubona apho "i-pacifier", ephethe ibhulukwe, ngexesha labo elincinane abantu abahlala "baxhomekeke" kwintlalo. amanxibelelwano, ngoko ke ababangela ukuba bathembele kakhulu kubaphathi babo kwaye bangajongi ukukhanya. Eofisini uhlala kumgangatho ophakathi, akukho nto engavamile emsebenzini wakhe, nangona kunjalo abantu abanjalo bakholelwa ukuba umsebenzi wakhe unomdla kwaye ubalulekile. Ngokuqhelekileyo, kufuneka kuqinisekiswe ukuba "i-dummy" ngcaciso ayinayo ingqiqo nolwazi.
Umba ohlukeneyo ufanele umbuzo wemali. Ngenxa yezizathu ezicacileyo, abanalo, ngoko, akuyi kumangaliswa ukuba xa kumanqanaba okuqala okuthandana naye uya kuhamba epaki yasebusika, ukukhwela iindawo ezikhangayo, ujabulele umoya omnandi womoya, imibono yothando, ingxoxo engapheliyo. Iindawo zokutyela zokuqala kunye neentyantyambo ezivela kuyo azikwazi ukulinda. Ngokuqhelekileyo umda omnye usukuma, iikotiti ezimbini ze-movie kunye ne-popcorn.
Ukongezelela, kunokwenzeka ukuba uqaphele umntu oyindoda ngombala onjengephupha - uyakha ikhefu rhoqo kwiindawo ezingaphiliyo. Uhlala ecwangcisa ishishini lakhe kunye namaphupha, emva kweenyanga ezi-6 uya kuba ngumgidi-mali. Uya kubeka ngokulula iizwe ezili-12 kunye neendawo zokungcebeleka, apho uya kufuneka uhambe naye. Yaye xa, emva konyaka, xa unomdla kuye, xa uhamba ukuya kumatikiti, "i-dummy" iya kukunika izizathu ezigidi, abantu kunye neziganeko ezithintela ukuphunyezwa kwezicwangciso zakhe ezingenakuncedo.
Umqondiso wokugqibela we "dummy" unokuthiwa isimo sakhe sengqondo kuwe, nakwimigaqo yabasetyhini. Ngokuqinisekileyo, umlomo wakhe uhlabelela i-trills malunga nothando olungenammangaliso, ubuhle, kodwa akukho nto ilandele la mazwi! Uthembisa ukuba iinkwenkwezi ezivela esibhakabhakeni, idayimane, zonke iintsikelelo zehlabathi, ziqinisekisa uncedo kwindlu kunye nenkxaso enokwethenjelwa, ngokungathandabuzeki ufunga ukunyaniseka. Kodwa xa ixesha lokuthatha isenzo, lisebenza njengengca, apho ungakwazi ukuhlala ixesha elide ngexesha lexakeka okanye imeko yekhaya. Ngamanye amanyathelo akhe aya kubonisa ukuba nayiphi na ingxaki iza kuhlaselwa ngamagxa akho athathaka. Ngenxa yoko, cingisisa ngaphambi kokuba uthathe ubomi kunye nommeli wesilisa. Kwixesha elizayo, xa unabantwana, i-mortgage, ibhizinisi elidibeneyo, ngaba uya kukwazi ukuphakamisa umthwalo ongenakubekezelelwa wedwa?
Uluhlu lwe "ukuhlaselwa kweemvavanyo" kwala madoda
Masibhale yonke into engentla kwaye sinqume iimvavanyo umthandi wakho kufuneka adlule phambi kwakho ukusemthethweni ubudlelwane bakho kwaye uya kususa imaski yesikhulu.
Ukusebenza kakuhle kwemisebenzi kunye nokusebenza kwemali. Ngokwemvelo singenzi ukuba baqinisekise ukuba "abaphathi" bafumana umvuzo ongaphantsi kwama-$ 10,000 ngenyanga. Ngokuqhelekileyo, onke amanani anxulumene. Kubalulekile ukukhokelwa yindawo apho umlingani wakho ehlala kwizinga eliphezulu lomsebenzi, ukujonga iinjongo azibeka yena kunye noko akwenzayo ekuphunyezweni kwazo - ezi ziyimpawu ezichasayo i-parasite evela kwi-megalomania evela kumntu ofumana ngokwenene.
Umlinganiselo wezicwangciso, amaphupha kunye nezenzo zangempela. Ukuba umfana wakho uthetha kuphela kwaye wenza izicwangciso, ngoko nje u-pogor kwaye uziqhayisa. Ikhupha idijithi yokugqibela, ingcono. Ngendlela, nawaphi na ibali lakho elincinciweyo, uhlukanise "i-noodle" kwiinyani. Thina, abafazi, njengokuba siyazi, bathanda iindlebe, kodwa kufuneka ukhethe iqabane lobomi, ingqondo kunye nentliziyo.
Kwimeko nayiphi na inokuthenjwa. Ikhono lokuphendula ngamagama omntu luphawu oluphambili lomntu. Ukuba uthe uthetha i-carpet kwindawo yokucoceka eyomileyo kwaye wenze ngaphambi kokukhumbuza isikhulu sakho-lo ngumfundi ofanelekileyo. Uthatha inxaxheba ngokuthe ngqo kwimfundo yabantwana kwaye ekuncedeni wena ekhaya - kakhulu! Ukuba uqala naye, nokuba yinto elula, kwaye ithatha ininzi yemithwalo yemfanelo kunye noxanduva - kulo mzekelo unenhlanhla! Kuba umntu okwazi ukwenza ngezandla zombini!
Ukuba uvakalisa konke oku ngasentla ngegama elinye, kuya kuzwakala ngathi: "indoda edibeneyo" ibonakala ngegobolondo ebonakalayo eyenziwe nguye, ukubethela ikhwelo kunye nokungabikho kokubhaliweyo ngaphakathi.
Ukuba wena, emva kokufunda umgangatho wethu wokuba umzekelo (okanye, ngokuchanekileyo, ukungabi nalutho), waqaphela ngokukrakra: Thixo wam, yintoni into endiyenzayo kumfana wam, ukuba njani? Ukuba ngokucacileyo, gxotha into engenakuncedo kwaye ingadingekile endlwini. Ngokwemvelo, umntu, ixesha elide leentlanganiso zakho, ungumlutha, unomdla kunye nesinye isidingo, kodwa ngakwelinye icala awuyena umntwana, uyaqonda kakuhle ukuba awukwazi ukwakha ikamva lomntu onjalo. Ukuqhawulwa kobudlelwane kungcono kwinqanaba elide, de kube uvelwano lwakho "lwe-dummy" lube yinto engaphezulu. Kukho amadoda amaninzi ehlabathini, aqinile, ahlakaniphile, athembekileyo! Simele sithande thina kwaye sikholelwe ukuba ufanelekile! Njengoko bethetha, iingcamango zinepropati yokwenza izinto!
Awuyi kuba nomona ngomyeni kwixesha elidlulileyo?
Ukunquma komntu wesilisa: iimpawu kunye nokubonakaliswa
Yintoni ephikisa amadoda ekubonakaleni kwabasetyhini?
Isaladi yamaGrike kunye ne-zucchini kunye neetatayi
Ikhekhe "Umama oMnandi"
Ucoceko olusondeleyo emva kwesondo
I-Homeopathy, i-lymphatic drainage kunye ne-osteopathy yeengxaki zomlenze